यसलाई वजन चाँडै आहार स्याउ गुमाउन मद्दत गर्छ
यो अक्सर जो विभिन्न आहार, एउटा पातलो आंकडा रिसोर्ट को पीछा मा धेरै महिला, पनि केही प्रभाव छोटो समयको लागि, दिन भने कुनै गोप्य छ। धेरै फरक आहार स्याउ कार्य। यो मात्र होइन वजन गर्न एकदम मद्दत गर्छ, तर भविष्यमा वजन फिर्ता गर्न आउँछन्। यो छ सात अतिरिक्त किलोग्राम गुमाउन तपाईं यो हप्ता गर्न मद्दत गर्नेछ एकदम सरल आहार छ। यसलाई केही स्याउ समात्नुहोस् धेरै गाह्रो छ तापनि, तर यो अझै पनि सम्भव छ, र प्रभाव बस आश्चर्यजनक छ।
यसबाहेक स्याउ हरियो चिया खनिज गैर-कार्रोप्नेटेड पानी पिउन सक्छन्। यो आहार को पहिलो दिन तपाईं दोस्रो, प्रति प्रति स्याउ को किलोग्राम दिन खान - आधा किलोग्राम। यसबाहेक, तेस्रो र चौथो दिन स्याउ आहार तपाईं प्रति दिन स्याउ दुई किलो खान अनुमति दिन्छ। पाँचौ र छैटौं दिन, तपाईं फेरि आधा किलोग्राम लागि सातौं दिन, यी स्वादिष्ट फल को एक किलोग्राम खान दिन अनुमति पहिलो जस्तै खान सक्नुहुन्छ, र अन्तिम।
त्यहाँ विभिन्न रोगहरूबाट संग मान्छे को लागि केही प्रतिबन्ध छन्। त्यसैले, एक व्यक्ति छ भने एक ग्रहणी अल्सर, त्यसपछि यो अमिलो स्याउ contraindicated छ। gastritis गर्नेहरूलाई, मीठा स्याउ खान सक्दैन। स्याउ को हरेक किलोग्राम चिनी को एक सय ग्राम थप्न लागि हृदय प्रणाली को रोगहरु संग मान्छे एक आहार मा हुनुपर्छ।
साथै, स्याउ आहार चाँडै तपाईं घृणा अतिरिक्त किलोग्राम को, यो पनि स्वादिष्ट छ राहत गर्न। तपाईं आफूलाई को लागि सबै भन्दा मनपर्ने चयन गर्न स्वतन्त्र छन् स्याउ को किसिमहरु। स्वास्थ्य खो वजन। तर यो ज्यादा छैन। यो आहार त्यसैले जाने छैन र केही स्याउ मा बस्न जारी, ठ्याक्कै एक हप्ताको लागि रहन्छ। आफ्नो शरीर तनाव देखि एक ब्रेक दिनुहोस्। आखिर, स्याउ आहार मात्र स्याउ को दीर्घकालीन प्रयोग को मामला मा जस्तै, तपाईं आफ्नो शरीर हानि गर्न सक्छ, सकारात्मक प्रभाव उद्देश्य छ।
कुनै कम प्रभावकारी अर्को आहार, अब छलफल गरिने। त्यो र उपयोगी र वजन गर्न मद्दत गर्छ। यो आहार "चामल, चिकन, स्याउ," नौ दिनको लागि डिजाइन गरिएको छ। यो अवधिमा, तपाईं पाँच किलोग्राम गुमाउनु हुनेछ। यहाँ, एउटै कुरा खान हरेक तीन दिन - हामी मात्र उसिनेर खाने चामल, तेल र नुन पहिलो तीन दिनमा। चावल एक बिट tastier थियो, तपाईं सोया सस थप्न सक्नुहुन्छ।
अर्को तीन दिन मात्र पकाएको सेतो मासु चिकन स्तन खान आवश्यक छ। को चिकन टुक्रा बाँकी यस्तो आहार लागि उपयुक्त छैनन्। मासु र खुर्सानी नुन छैन।
र अन्तमा, आहार को पछिल्लो तीन दिन मात्र स्याउ खान अनुमति छन्। तपाईं कुनै पनि प्रकारको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर अझै पनि, यो कम मीठो प्रजातिहरू रोज्न राम्रो छ।
हरेक दिन तरल पदार्थ कम्तिमा दुई लिटर पिउन भूल छैन। यो एक खनिज पानी वा unsweetened हरियो चिया हुन सक्छ। तपाईं जडीबुटी संग चिया बनाउँने गर्न सक्नुहुन्छ।
अर्को मूल र एकदम प्रभावकारी kefir-स्याउ आहार -9दिन माइनस9किलो। यो दही र स्याउ को जीव लागि धेरै उपयोगी कुनै गोप्य छ। यो आहार तपाईंलाई मात्र होइन अतिरिक्त वजन हटाउनेछ, तर पनि बल र ऊर्जा, vivacity र राम्रो मुड पाउन।
त्यसैले, आफ्नो मेनु को पहिलो तीन दिनमा मात्र कम चासो दही हुन्छन्। यो डेढ लिटर हुनु आवश्यक छ एक दिन पिउन। चौथो दिन देखि सुरू सम्म छैटौं समावेशी मात्र खान हरियो स्याउ, प्रति दिन आधा किलोग्राम। सातौं देखि आहार को नवौं दिन फेरि kefir कम चासो आधा लीटर लागि हरेक दिन पिउन। तपाईं नौ दिनको लागि खान सक्नुहुन्न भने त प्रयास तीन दिन आहार, प्रत्येक दिन कम बोसो दही दुई लिटर पिउन र संयमता कुनै पनि फल खान जुन बेलामा। एक आहार संग शुरू, र त्यसपछि, तपाईं अब पछिल्लो गर्न सक्छन् भने, नौ दिनको लागि गणना आहार मा जानुहोस्। आहार भन्दा भएपछि खान प्रयास गर्नुहोस्। आफ्नो स्वास्थ्य गर्न प्रमुख - सबै, उचित पोषण पछि।
सबै भन्दा राम्रो चीनी विकल्प के हो? हानि र चिनी विकल्प को लाभ
गर्भवती महिलाका लागि व्यक्तिगत मेनु। म तपाईं चाहनुहुन्छ जे खान सक्नुहुन्छ?
Neokub - एक बच्चा को हात मा खतरा
Explay सपना। स्मार्टफोन Explay सपना - समीक्षा मोडेल, ग्राहक समीक्षा र विशेषज्ञ
फ्रान्सेली hunky "Renault Kangoo" - प्राविधिक विनिर्देशों आफु को लागि कुरा!
नराम्रो "Urisan": प्रयोगको लागि निर्देशन
एचआईभी डाक्टर: क्षमता, पुस्तिका
सबैभन्दा सुन्दर वर्ग: को रोचक विचारै, विकल्प र व्यवसायीक को सिफारिसहरू
सोडियम tetraborate को गुण। चिकित्सा प्रयोगको लागि र दैनिक जीवनमा निर्देशन